Zvishoma uye zvishoma zvinosara kumusangano unotevera wekuvandudza umo Apple icharatidza iOS 10 uye neshanduro nyowani dzeOS X (kana MacOS), tvOS uye watchOS Pari zvino iOS 9 inoita kunge yakamiswa pa84%, zvakafanana muzana yemasvondo maviri apfuura. Vhiki rino rinopera nhasi tinaro pfungwa nyowani yeIOS 10 yataigona kunakidzwa nayo Widget yemamiriro ekunze kuti kana uchitsimbirira pairi, ruzivo rwemamiriro ekunze rwunoratidzwa pachiringi, rinoita basa rinomhanyisa zvakanyanya nguva yatinopedzera mukutarisa ruzivo rwemamiriro ekunze. Asi isu takuratidzawo iwe izvo zvitsva zvinoshandurwa zveiyo iPhone 7 uye iPhone 7 Plus mune iyo kutsakatika kweiyo headphone jack uye nyowani Smart Connector chinongedzo pane iyo iPhone 7 Plus yaizosimbiswa.
Kana zviri zvekushandisa zvakagadziridzwa, hutsva hukuru hunowanikwa mu Instagram iyo yakagadzirisazve logo yayo. Kana iwe uchiri kusarudza yapfuura imwe, muActualidad iPhone tinokuratidza sei tinogona kuzviita tisingafanire kupaza jeri. Chimwe chinhu chitsva chinowanikwa muvhidhiyo mutambi VLC, iyo pakupedzisira inotsigira AC3 odhiyo fomati mafaira. Vhiki rino iyo mutambo wakasununguka wevhiki ndiKing Tsuro, mutambo wepuzzle wakasiyana.
Zvinoenderana neazvino Kantar mushumo, iPhone iri kurasikirwa pasi kune Android, kupi zvese mugove wakaraswa neWindows Phone waunganidzwa neApple. Apple vatengesi vanoita kunge havana tariro yakawanda yekutengesa iPhone 7 mune ramangwana, nekuda kwekushaikwa kwehunyanzvi. Runyerekupe rwazvino, kwete pfungwa, zvine hukama iyo iPhone 7 inoti iyi modhi inogona kunge iine 3 GB ye RAM.
Tichakamirira kusvika kwenjuzu, jailbraek uyo asina mukana wakawanda wekusvika, nyanzvi yekuchengetedza Stefan Esser akatumira kunyorera muApp Store kuti agone ziva nguva dzese kana iPhone yedu yatapukirwa nechero malware kana faira rinoratidza kuti rakabiwa.
Ndokumbirawo kuti murege kumisidzana nedhizaini yewebhu? Uye zvino neruvara irworwo! Kusemesa kwakadii.
Zvirinani raive dhizaini yekutanga kubva pamwedzi mina yapfuura
Iyi inogona kuve iyo iPhone 8 iyo Apple yaizovhura muna 2017
Mashandisiro aungaita Apple Bhadhara kuSpain (uye chero nyika)